Aung Thiha Maw's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Aung Thiha Maw
Blog Posts (2)DiscussionsEventsGroups Aung Thiha Maw's Likes Aung Thiha Maw's Friends
Aung Thiha Maw has not received any gifts yet
Aung Thiha Maw's Page
MzG liked Aung Thiha Maw's blog post Offline Installation the .NET Framework 3.5 on Windows 8Feb 22htein linn liked Aung Thiha Maw's blog post Offline Installation the .NET Framework 3.5 on Windows 8Feb 5Maung Khin commented on Aung Thiha Maw's blog post Windows 8 ပေါ်မှာ virtual disk တစ်ခု တည်ဆောက်၍ password ပေးကာ သုံးရအောင်"ဘယ်လိုအနေအထားမှာသုံးရင်ကောင်းပါသလဲ?
၂၀၄၈ အတွက်တော့ USB stick လေးတခုဆိုလောက်နေပါတယ်။ တခြားအလုပ်ကြီးကြီးအတွက်ဆိုကောင်းမလားလို့"Jan 23Aung Thiha Maw posted blog postsOffline Installation the .NET Framework 3.5 on Windows 8Windows 8 ပေါ်မှာ virtual disk တစ်ခု တည်ဆောက်၍ password ပေးကာ သုံးရအောင်Jan 16Aung Thiha Maw updated their profileJan 13 RSS
Aung Thiha Maw's Blog
Windows 8 ပေါ်မှာ virtual disk တစ်ခု တည်ဆောက်၍ password ပေးကာ သုံးရအောင်
Posted on January 13, 2013 at 7:12pm 1 Comment
Windows 8 ပေါ်မှာ virtual disks တွေ တည်ဆောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁။ Screen ရဲ့ ညာဘက် အောက်ခြေထောင့်Start နေရာမှာ right-click နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Menu ကနေ Disk Management ကို ဝင်ပါ။ Disk Management Windows တက်လာပါလိမ့်မယ်။
၂။ Action Menu ကနေ Create VHD ကို နှိပ်ပါ။ Browse ကနေတဆင့် သင်နှစ်သက်ရာ နေရာတစ်ခုခု (ဥပမာ ။ Desktop ) မှာ virtual.vhd ဆိုပြီး နာမည်ပေးပါ။ သင်နှစ်သက်ရာ နာမည်တစ်ခုခုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ Virtual disk size မှာ သင်လိုအပ်သလောက် ပေးပါ။ (e.g 2048MB) ဒါဆိုရင် Desktop ပေါ်မှာ… Continue Offline Installation the .NET Framework 3.5 on Windows 8
Posted on January 13, 2013 at 7:03pm0Comments
Installation the .NET Framework 3.5 on Windows 8
.NET Framework 4.5 ကို Windows 8 မှာ တပါတည်း အလိုအလျောက် install လုပ်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ .NET Framework 3.5 ကိုတော့ install လုပ်မထားပါဘူး။ တစ်ချို့သော Applications တွေ အတွက် .NET Framework 3.5 ကို လိုအပ်တဲ့အခါ enable and install လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ .NET Framework 3.5 install လုပ်ဖို့အတွက် internet connection လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ Control Panel>Program and Features မှတဆင့် Turn Windows features on or off ကို သွားပါ။ .NET Framework 3.5 (… Continue AddaBlog Post
ml updated their profile13 hours agomanawphyulay leftacomment for Aung Kyaw HtinSaturdaymanawphyulay leftacomment for Ko ChitSaturdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsSaturdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 4peepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 3Nga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 3LIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Nov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26 More... RSS